Nzira Yokumhanya Nayo Linux paAzure, Chikamu II: Zvimwe Zvinyorwa - ITS Tech School
Nzira Yokumhanya Nayo Linux paAzure, Chikamu II: Zvimwe Zvinyorwa
Ichi ndicho chechipiri chechikamu chechikamu chebhuku chebhuku pamusoro pekushanda Linux paAzure. Muchikamu chikuru cheBhuku reChitatu I ndakataura pamusoro pezvinyorwa zve kumhanya Linux paAzure. Mune chinyorwa ini ndichaenda zvimwe zvakanyanya kuve chikamu chemashoko anokosha andakawana pakutsvaga nzira dzakasiyana Linux on Azure munguva yose yapfuura imwe nguva.
Linux on Azure: Up uye Running
Linux on Azure: Security, Scalability uye Availability
Chimwe chinhu chinonakidza pamusoro kumhanya Linux paAzure ndiko kuderera kunosunga Linux virtual machines kusvika muAzure chiitiko. Ichi ndicho chimwe chinhu chakandinyadzisa ini zvishoma. Ndakatarisira kuti zvinhu zveMicrosoft zvinganyatsogadzirisa neAzure (uye zvinodaro) asi ndaitarisira kuti kusanganiswa kweLinux kwaizova kusina kunaka.
Izvozvo zvakaitika kuti hazvisi mamiriro ezvinhu. Pane Linux augmentations iyo inoratidzira zvakananga muAzure. Izvo zvinowedzera zvinoshandiswa pane zvakawanda Linux distros. Unogona kutanga, kuvhara pasi uye kunyange skrini ye Linux zvidzidzo kubva mukati maAzure. Zvinhu zvakadai sezvikwata zvebhokisi uye kuyerwa kwezviyero zvakanyorwa mukati Azure uye inogona kuonekwa kubva mukati meAzure Portal.
Pane kuwedzera kwakasiyana, zvakare, scripting augmentation inobvumira zvinyorwa kuti zvipinde muchina weWinux.
Kwandiri, kutaridzika ndeye ruzivo runokosha rwekugovera computing. Kugadziriswa kwemiganhu kana zvichidiwa uye kuti-kureva muganhu wakati hauna kudikanwa ndeye kuongororwa kwenheyo yekugovera computing. Kunyange zvazvo mishonga yakakwana inogona kunyatsobatanidzwa fukiti ine-inzvimbo yepurazi yepurazi, yakaparadzirwa computing nokuda kwechikamu chikuru inogadziridza nzira iyo ichiuraya kudiwa kwekuchengetedza zvigadzirwa uye chirongwa chekusimudzira. Mazai anotsigirwa mashandisirwo emagetsi anowanzokwira kumusoro kana pasi achiona mutoro, pane imwe khalendari kana pane chinangwa chisingaiti. Iko kukwanisa kunowanikwa Windows uye Linux mishonga chaiyo sezvakaisa mapeji. Linux scale sets rinogona kuwedzera kana mukati nekuda kwekukosha kwekuenzanisa zviyero, somuenzaniso, purogiramu kana kuyeuchidza. Iyo Linux Azure inopupurira mushumo wehutano hwekuuraya hunobva pamakineti emakineti akaenzana akaiswa kuAzure uye panguva iyoyo iyoAzure autoscale mano anobata kutonga. Chikamu chikuru cheizvi chakanyatsojeka kumabasa ekushanda pamushandisi chaiwo. Kamwe zvakare, nhau apa ndeyokuti Linux scale setsiti inogadzirwa uye inoshanda zvakafanana neyema Windows setsero.
Zviri pachena, Linux virtual machines vane chikamu chikuru chekuchengeteka kwechikamu. Pakaitika kuti Microsoft yakaisa uye inoramba ichiisa nesimba zvakachengeteka. Ichi hachisi chiratidzo chechipo chinoremekedzwa neImicrosoft. Cloud suppliers vanoda chikwata chepamusoro chekuchengetedza kupfuura chero ani zvake munhu. Pachine mukana wekuti kune ruzivo rwekuparadzanisa kune mutengesi iye zvino mutengesi achatora huripo asi achangopona pamusana pokuti ruzivo harusi chinhu chavo chinokosha. Pachinhu chakaitika kuti kune ruzivo rwakakosha ruzivo muAzure, ipapo Azure inogona kunge yakafa. Muchiitiko icho vatengi vasinganzwi kuti hupfumi hwavo hunochengeterwa muAzure, havazoshandisi Azure. Microsoft yakaratidza pachena kuti haifaniri Azure yakafa.
Kune nzira mbiri dzekutora gander pakachengeteka mukati maAzure: kuchengetedzwa kwakaitwa mujini uye kuchengeteka pasi pekutonga kwako. Mu injini yekuchengetedzwa kunoenderana neboka guru rezvigadzirwa zvemabhizimisi. Ini handiri munhu akachengeteka asi panzvimbo pfupi rundown yeAzure security certs anongotarisa chaizvo kwandiri.
Muchiitiko chekuti pane humwe huviriro hunochengetedza hunodiwa kune hupfu hwakanaka hunoitwa naAzure, kana kuti nokukurumidza. Iwe unogona kuwana ruzivo rwakangwara rwekuchengetedzwa kweAzure hunovimbiswa pa https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/default.aspx.
Izvi zvinongomhanya zvakananga zviratidzo zvepakati pezvikamu zveAzure zviripo zvinogadziriswa.
Asi zvisinei nenyama uye nezvekuchengetedzwa kwemashoko zvinoitwa mukati meAzure pachake, une zvishoma zvekuchengeteka zvinokurudzira zvinogona kuwirirana nebasa rako re Linux muAzure:
Rongai Makira Akachengeteka. Rongai Makira Akachengeteka kana maSGG anoenda semhepo dzinopisa moto mukati meAzure virtual systems. Nzira dzeSGG dzinogona kukanganisa kufamba kwakasviba uye kubuda kunobva kune chinangwa uye chinangwa pakatarisana nekero nechiteshi. NSGs inogona kusanganiswa nemichina yakagadzirwa nemunhu mumwechete kana kuti zvikamu zvepasi rese.
Kutungamirira Mitemo. Kutungamira mitemo kunokubvumira kuita basa rekushandisa kuburikidza nekuguma kunotarisa kana kutarisana pamusana pemugumo, chinangwa uye chikepe. Pamwe panjodzi yekuti iwe pachako unofambisa moto kana kuti iwe unongororesa unogona iwe usina zvakawanda zvekugadzirisa makirini nemichina yakarongedza mitemo yekusimudzira kufamba kuburikidza negadget.
Vhura IP Mazita. Mishonga inonzi Virtual inoramba ichishanda mumagetsi. Senyaya yekuti izvi zvese hazvisviki pawebhu. Kero yakasununguka IP inotarisirwa chero ipi zvayo yewebhu yakagadziriswa yekuwana kumushandisi chaiwo.
Yakatengesa zvinotyisa zvinotyisa. Virtual driy hard can now be encoded in Azure giving information yet still insurance. Linux virtual hard drive encryption inoshandisa DM-Crypt inojekesa uye inowanikwa kune mahwendefa akaoma akadai (VHDs) akaitwa muAzure kana VHDs iyo yaiva panguva iyo yakaiswa nekodhi ndokuendeswa kuAzure.
nokuti Zvichida mukamuri, robotization uye kudzokorora zvinokosha. Nenzira yakaisvonaka yeMicrosoft, kune chikwata chinowedzera chiripo chezvipo zvinopa zvose. Azure ine sangano rekusimbisa Chef uye Puppet. Azure Saizvozvowo ine sarudzo yake chaiyo yekugadziriswa kwemasimba inonzi PowerShell inoshanda. Michina inosvika mukati Linux virtual machines kuburikidza nekunyorwa kwechinyorwa uye kufungidzirwa kwenyika. Putira pamwe chete neJSON-based tsanangudzo yenzira yekugadzira zvinyorwa zvose zveAzure uye REST-based API yehumwe humwe unhu hweAzure uye pane nyaya yakasimba yekugadzirwa kwepamusoro uye DevOps.
Pamusana pekuti iwe unofarira kuchinja zvakawanda pamusoro pekushanda maitiro ekushanda kweLinux paAzure, Global Knowledge yakaunganidza mamwe mapfupi, mazano emangwana akangotarisa kushanda kwe Linux paAzure. Idzidzo dzinotarisana nezvinetso pane kukuita iwe kuburikidza nemakwikwi nema-step-labs. Zvidzidzo zvinokupa zvinangwa zvakadzama uye zvikamu uye zvinokubvumira kuti uite purogiramu yako chaiye. Zvinetso zvinokupa rubatsiro rwakasimba sezvaunoda, kubva pane kutsanangurwa kwezviratidzwa uye nitty gritty mirayiridzo kune chero basa raunogona kuwedzera rubatsiro. Iwe unowana mukana wokutora rubatsiro rukuru rwaunoda, uye kana wapedza muedzo iwe unotumira iwo kuongororwa nehurukuro master.